इमानदार घरबन्दीको बकपत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
इमानदार घरबन्दीको बकपत्र
चैत्र २८, २०७६ उज्ज्वल प्रसाईं
सरकार समाचार बनेर नागरिकका घरघर पुगेको छ । नागरिक–मस्तिष्कमा महामारीको भयसँगै सरकारका खबर धेरै छन् । खबरमा कोरोना महामारीको सामना गर्ने तयारी न्यून छ, अनियमितताका फेहरिस्त ज्यादा छन् ।
एउटा अनियमितताको कथा पढिनसक्दै, अर्को उस्तै अत्त्याउने कहानी आउँछ । यी भ्रष्टाचारका कुनै पनि समाचार खण्डन भएका छैनन्, गलत प्रमाणित गरिएका छैनन् । करोडौं नागरिकका श्रमले सृजना गरेको राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेका ‘तथ्य’लाई चुनौती दिने विश्वसनीय तर्क र प्रमाण पेस गरिएका छैनन् । भ्रष्टाचारका घटनाले पार्ने आघातको हिसाब गर्ने सर्वेक्षण कहिले हुन्छ ?
निमुखा र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका दुःख सुविधाजनक घरमा बन्दी हुनेका लागि कल्पनातीत छन् ।ललितपुरदेखि सुनसरीसम्म पैदल हिँडेको कल्पना गर्न हम्मे पर्छ । घरबन्दीले निर्धारण गरेका सीमितताबीच सम्पर्क भएका निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकका कथा पनि महत्त्वका छन् । हठात् आइलागेको फुर्सदमा उनीहरूले सबैभन्दा उपभोग गरिरहेको ‘वस्तु’ सम्भवतः समाचार नै होला । अन्यत्र कोरोना–असर भोग्ने मान्छेका गन्ती छन्, यता कमिसन–काण्डका सूची । नेतृत्वका लहडी बोली र व्यवहारका किस्सा थपिएकै छन् । यी सबै थरी गन्तीले भय, आक्रोश, अलमल एवं अनिश्चयका चिन्ता बढाएका छन् ।
मेचीनगरको सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने एक शिक्षकको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । महाव्याधि फैलने शंका भएपछि विद्यालय बिदा गरियो, बन्दको घोषणा भएको अघिल्लो दिन विद्यालयमा दुई दर्जन कम्प्युटर आइपुगे । साथमा, ब्याट्रीलगायत अन्य जडानका सामान पनि थिए । मुलुकभरिका ९३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै ती सामान आइपुगेका हुन् । बन्दका कारण कम्प्युटर जडान गरेर प्रयोगशाला बन्न पाएन । घरबन्दीमा रहेका ती शिक्षकले हालसालै चर्चित भएको ओम्नी ग्रुप सम्मिलित भ्रष्टाचार काण्डका समाचार पढे । आफ्नो विद्यालयमा आइपुगेका कम्प्युटर आखिर अर्बौंको भ्रष्टाचारका दसी रहेछन् भन्ने उनले अखबार पढेर थाहा पाए । सञ्चार मन्त्रालयमा बुनिएको कमिसनको तानाबानाले आफ्नो विद्यालयमा समेत सोझो असर परेको थाहा पाउँदा उनलाई उदेक लाग्यो ।
‘अनियमितता संगठित छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको छ । हामीजस्ता शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट वार्षिक रूपमा बुझाउने बीस हजारभन्दा बढी रकम पनि यसरी दुरुपयोग भएको देख्दा दिक्दार र निःशब्द हुन्छु ।’
गत वर्ष पुसमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्‍यो । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पूर्वाधार भएका प्रायः विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरे । विद्यालय छनोटमा नगरपालिकाका साथै सो क्षेत्रका निर्वाचित संघीय संसद् सदस्यको पनि सिफारिस आवश्यक थियो । छनोटको सो प्रक्रियाले दलीय प्रभाव अत्यावश्यक बनायो । अर्थात्, छनोटका वस्तुगत मापदण्ड गौण भए, दलीय प्रभाव मुख्य बन्यो । विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र सांसदको दलीय संलग्नता एकै भएका विद्यालयहरू छनोटमा परे । मेचीनगरमा प्रविधि प्रयोगशालाका लागि छनोट भएका विद्यालयहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भने, पूर्वाधार एवं आवश्यकताका कसीमा अहिलेका भन्दा अन्य दुई विद्यालयले पाउने सम्भावना बलियो थियो । दलीय दबाब झेल्न नसकेका सांसदले चाहेर पनि अरू विद्यालयलाई सिफारिस गर्न सकेनन् ।
दलीय प्रभावको कथा त्यहाँ टुंगिँदैन । पहिले छनोट गरिएका विद्यालयमा सन्तुष्ट नभएपछि सत्ताधारी दलको इसारामा अन्तिम अवस्थामा विद्यालयको सूची हेरफेर गरिएको शिक्षाबारे रिपोर्टिङ गर्ने विश्वसनीय पत्रकार बताउँछन् । छनोटमा दलीय प्रभाव बलियो बनाउनकै लागि शिक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भएको तथ्य पनि फेला परेको छ । अर्थात्, दलीय चलखेलका अनेक पत्र छिचोलेर प्रविधि प्रयोगशालाको कार्यक्रम तय गरियो ।
बजारभाउभन्दा धेरै महँगोमा खरिद गरिएका २३ हजारमध्ये २४ थान कम्प्युटर राखेर प्रविधि प्रयोगशाला बनाउन हतार गर्नुपर्ने कारण नभएको ती शिक्षकको बुझाइ छ । ‘कम्प्युटर कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक दोस्रो पत्रमा मात्र लिन सकिने विषयका रूपमा छ । अत्यधिक विद्यार्थीले दोस्रो पत्रमा लेखा, शिक्षाजस्ता विषय छनोट गर्छन् । त्यसले गर्दा पनि कम्प्युटर सामुदायिक विद्यालयमा रोजाइको विषय बनिसकेको छैन ।’ अन्य कामका लागि प्रविधि प्रयोगशालाको उपयोग हुन सक्छ । तर, त्यसरी काम लिन सक्ने गरी कम्प्युटरको उपयोग गर्ने जनशक्ति विद्यालयमा छैन । आज बाँडिएका कम्प्युटर र हतारमा बनाइएका प्रयोगशाला केही वर्षपछि बेहाल अवस्थामा भेटिन सक्छन् । त्यस बेला माकुराको जालोमा प्रयोगशाला मात्र होइन, अनियमिततामा संलग्नको अनुहार पनि पुरिएको हुनेछ ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबरपछि प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनको काम उत्साहप्रद नहुने ती शिक्षक बताउँछन् । समाचारमा पहुँच भएका विद्यार्थीले प्रयोगशालामा प्रवेश गर्दैगर्दा भ्रष्टाचारकै कथा सम्झने भए । विद्यालयको पूर्वाधारलाई आफ्नै सम्झेर जतनले चलाउनुपर्ने शिक्षक र विद्यार्थीमा सो प्रयोगशाला र त्यहाँ राखिएका उपकरणप्रति अपनत्व जगाउन हम्मे पर्ने भयो । आफ्ना नाममा गरिएका अर्बौंका भ्रष्टाचार देखेपछि ‘बरु यो प्रयोगशाला नभएकै ठीकजस्तो अनुभूति’ हुने भयो । ‘अनियमितता संगठित छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको छ । हामीजस्ता शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट वार्षिक रूपमा बुझाउने बीस हजारभन्दा बढी रकम पनि यसरी दुरुपयोग भएको देख्दा दिक्दार र निःशब्द हुन्छु ।’
छनोटमा परेका मेचीनगरका दुईमध्ये एक विद्यालयमा विद्यार्थीसंख्या दिन–प्रतिदिन घट्दो छ भने कम्प्युटर चलाउने सीप भएको जनशक्ति पनि छैन । कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने शिक्षकको त खडेरी नै छ । शिक्षक भन्छन्, ‘सबै तथ्यलाई एक ठाउँ राखेर केलायो भने दृश्य स्पष्ट हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइलाई सहयोग गर्न यो काम भएको होइन । प्रयोगशाला बनाउने निर्णय मूलतः केही मान्छेका लागि अवैध दाम कमाउन गरिएको रहेछ ।’ कोरोना महामारीकै बीच यस्ता दिक्कलाग्दा दृश्य देख्नुपर्दा सिंगो समाजको भविष्य बढ्ता अन्योलग्रस्त लाग्न थालेको छ उनलाई । ‘नयाँ पुस्ताले अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, आन्दोलनबाट आउने वैकल्पिक नेतृत्व वा व्यवस्थाबारे अन्योल भएकाले सबै चुप लागेका होलान् ।’
महामारीको प्रभाव बिस्तारै कम होला, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा संस्थागत भएका भ्रष्टाचार कम हुने संकेत देखिँदैन । नेपाली समाजको चरम दलीयकरणको मौलो भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेले दलीयकरणको विद्रूपता देखेको र भोगेको हुन्छ । महामारीपछि त्यो ज्यादा विद्रूप हुने सम्भावना छ । इमानदार शिक्षक होऊन् वा स्वास्थ्यकर्मी, तिनका दुःख र अवसाद घट्नेछैनन् । यस लेखका शिक्षक पात्रले भनेझैँ राजनीतिक विकल्पको रिक्तता छ, जसका कारण मुस्किलले जोहो गरेको श्रम गर्ने जाँगर हराउन थाल्छ । विपत्का बेला पढ्नुपरेका समाचारले जाँगर मार्ने क्रम द्रुत बनाएका छन् ।
साबिक अवस्थामा भ्रष्टाचारको सिलसिला अकण्टक चल्छ । विपत्मा त्यो क्रम द्रुत हुन्छ, आयतन पनि ह्वात्तै बढ्छ । बहुसंख्यकले बेहोरेको आघातलाई अवसरमा परिणत गर्न जान्ने अल्पसंख्यकले विपत्मा सुरु गरेको दोहनको चक्र विपत् सकिएको धेरै पछिसम्म सुचारु रहन्छ । यसका साथै, राज्य बलियो बनाउने नाममा अवलम्बन गरिने नीति, नियम र ऐनहरूले तिनै मुठीभरको स्वार्थसिद्ध गर्छन् । स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण आयात गर्दा देखिएका हालसालैका अनियमितता त्यही अवसरवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् । सूचना नचुहिएका कति ‘धन्दा’सुचारु होलान्, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
विपत्‌मा र विपत्‌पछि आम मानिसका समस्या थपिँदै जान्छन्, उनीहरू असहाय र निरीह पनि बन्छन् । त्यसमाथि संकटको उपयोग गर्दै लागू गरिने ऐन र नियमले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउँछन् । तुर्केली लेखक एजे टेमलकुरनले भनेजस्तो घरबन्दी सबैको हितमा भए पनि यो बाध्यकारी अवस्थाले फासीवादको चरित्रलाई मजबुत बनाउने सम्भावना धेरै छ । तर, निम्न मध्यमवर्गीय फुर्सदीका लागि यो विद्यमान समस्याबारे सोच्ने, समाधानका विकल्पबारे चिन्तन गर्ने र नयाँ संघर्षका निम्ति ऊर्जा सञ्चय गर्ने बेला पनि हो । प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:२३
सजगतापूर्वक नागरिकको ज्यानका साथै लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।
चैत्र १४, २०७६ उज्ज्वल प्रसाईं
नेपाल सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरिसकेको थिएन । सीमा सहर काँकरभिट्टाका चियापसल सदाझैं व्यस्त देखिन्थे । सामान्य अवस्थामा चिया–कफीका विषय विविध हुन्छन्; कोरोना विषाणुको प्रभाव बलियो बन्न थालेकाले सबैतिरका संवादमा एकरूपता छ । विषाणु–त्रासदीबारे गफ चलिरहेका बेला सानो समूह जस्तो बनाएर बसेकामध्ये एक जना बोले, ‘धेरै पटक जाँचिसक्यो; केही छैन भन्छ ।’
परीक्षण गर्ने व्यवस्था काठमाडौंमा मात्र भएको तथ्य थाहा पाउनेका लागि सो भनाइ अनौठो थियो। संवाद लम्बिँदै जाँदा थाहा भयो, त्यसो भन्ने मान्छे भारतबाट नेपाल फर्कंदै गरेका यात्रु रहेछन्।
भारतका दक्षिणी सहरबाट फर्केका नेपाली मजदुर घर जाने क्रममा चियापसलमा केही बेर सुस्ताएका थिए। मेचीनगरका विभिन्न वडामा घर भएका उनीहरू अटो रिक्सा खोजेर घर पुग्न चाहन्थे। लामो यात्राको थकान र कोरोना–त्रासका कारण अनुहारमा उदासी देखिन्थ्यो। उनीहरूमध्ये कसैले भन्यो, ‘हामीलाई ट्रेन चढ्नुअघि कोरोना जाँच्यो। यता पुल तर्नुअघि पनि र नेपाल आइसकेपछि पनि जाँच्यो। सबै ठीक छ भन्छ।’ नेपालपट्टिको सीमानाकामा तापक्रम परीक्षण गर्ने थलोमा ‘कोरोना जाँच’ लेखिएको सूचनापाटी झुन्ड्याइएको थियो। प्रहरी जवानदेखि सामाजिक संस्थाका कार्यकर्तासमेत स्वास्थ्यकर्मीले पहिरिने सेता कमिजमा सजिएका थिए। यात्रुका नजरमा सेता कमिजधारी सबै चिकित्सक थिए।
मेचीनगरका उल्लेख्य तन्नेरी दक्षिण भारतका होटलमा मजदुरी गर्छन्। कतिपयले त्यहाँ लिएका सीपका आधारमा झापाका सहरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् भने, कतिपय चल्तीका रेस्टुरेन्टमा ‘कुक’ लगायत काम गर्छन्। रोजगारीको खोजीमा भारत बसेका होटल–मजदुर कोरोना विषाणुको फैलावटले महाव्याधिको रूप लिएको सुनेपछि घर फर्के। उनीहरूमध्ये कतिलाई रोजगारदाताले बिदा दिएका थिए। यात्रामा उनीहरूको तापक्रम लिइयो। शारीरिक तापक्रम सामान्य भएकै आधारमा उनीहरू घर पुगेर आराम गर्न एवं लामो समय भेट नभएका गाउँले साथीसँग रमाइलो गर्न चाहन्थे। पराई सहरभन्दा आफ्नो गाउँ सुरक्षित भएकामा उनीहरू ढुक्क देखिन्थे। महिनौं श्रममा घोटिएका उनीहरूका लागि यो ‘फुर्सद’ जस्तो पनि भान भइरहेको थियो।
नेपालबाहिरबाट आउनेले समुदायस्तरमा विषाणु फैलाउन सक्ने सन्देह बढ्न थालेपछि भारतबाट फर्केका रेस्टुरेन्ट–मजदुरको खोजी हुन थाल्यो।मेचीनगर–६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रहरीलगायतका टोलीले भारतबाट आएकालाई खोजी गरेर एकान्तबासमा राख्नखोजे। एकान्तबासका लागि स्थानीय विद्यालयका कोठा तयार पारे। खाना घरबाट पुर्‍याउने,बाहिरका कोही पनि प्रवेश गर्न नपाउने, स्वास्थ्यकर्मीले नियमित तापक्रम इत्यादि जाँच्ने र एकान्तबासमा बस्नेका लागि इन्टरनेटसमेत व्यवस्था गरेरबाहिरबाट आएकाको खोजी गरे। छरछिमेकीबाट सूचना लिएर खास गरी केरला जस्ता राज्यबाट गाउँ पुगेका केही तन्नेरीलाई एकान्तबासमा राख्न मन्जुर गराए। त्यसरी बाहिरबाट आएका महिलालाई भने घरकै एउटा कोठामा एक्लै बस्न सुझाइयो।बाहिरबाट आएकाको खोजी गर्ने टोलीमा सहभागी एक राजनीतिक प्रतिनिधिले भने, ‘अटेर गर्नेलाई अलि जबरजस्ती नै गर्नुपर्‍यो।’
एउटा वडामा यस्तो काम भएको सूचना अन्यत्र फैलियो। गाउँगाउँबाट मान्छेले छिमेकमा बाहिरबाट आएका मान्छे भएको खबर दलीय प्रतिनिधिलाई दिन थाले। तर, सबैतिर सुरक्षित ‘क्वारेन्टाइन’ को व्यवस्था भएन; सबैले उत्तिकै तदारुकतासाथ बाहिरबाट आएकालाई सम्झाइबुझाइ गर्न पनि सकेनन्; सबै व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टाइनमा बस्न मन्जुर पनि भएनन्। कतिपयले आफू स्वस्थ भएको, विषाणु नसरेको र कसैलाई सार्ने सम्भावना पनि नभएको जिकिर गरेर घरै बसे; नियमित काम र घुमफिर गरिरहे। केही ठाउँमा त्यसरी बाहिरबाट फर्केका मान्छे भएको घरका छिमेकी त्रस्त छन्।
नेपाल सरकारले पहिले सीमानाका बन्दको घोषणा गर्‍यो अनि ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णय र घोषणा भए पनि सीमानाकाको आवतजावत रोकिएन। आउन नपाएका नेपाली नागरिकले मेची पुलमा धर्ना दिए, नारा लगाए। एक दिनको समय दिएर अलपत्र परेकालाई घर फर्कने मौकादिइयो। फर्केका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनियो। तर न पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था थियो, न सरकारी निर्णय शिरोपर गर्ने धैर्य एवं जाँगर नै ती नागरिकमा थियो। त्यसरी भित्रिएका नागरिक कसरी बसेका छन् भन्ने सूचना कसैसँग छैन।
यातायात, बजार एवं कार्यालय प्रायः बन्द भएपछि बजारका मान्छेलाई फुर्सद भयो। खेतबारी कायम राखेका गाउँलेहरू नियमित काममै छन्। काममा जानु नपरेपछि सहरिया सवारीचालक वयस्कलेघरभित्रबाट बस्ने मुढा निकाले। घर अघिल्तिरको सडक लगभग खाली छ; गाडी दगुर्दैनन्। सडक किनारामा मुढा राखेर बसे। उनका ‘लज’ सञ्चालक छिमेकी पनि काठको सानो कुर्सी लिएर आए अनि त्यसैमा बसे। नजिकैको औषधि पसल खुला छ तर ग्राहक खासै छैनन्; पसल सञ्चालकले एउटा बन्द सटर अघिल्तिरको पेटीमा नितम्ब टेकाए। फुर्सदमा टहल्न निस्केका अर्का छिमेकी पनि त्यहीँ अडिए। सचेत भएर हो वा संयोगले, उनीहरूले आपसमा सामान्य दूरी कायम राखेका थिए।
मुढामा बसेकाले भने, ‘यो भाइरस मान्छेले बना’को रैछ नि ! मानवबम भन्थे पहिलापहिला। मान्छेलाई बम बनाएर पड्काउने। अहिले त भाइरस बनाएर संसार फैलाउन सक्ने रैछन्।’ अर्काले भने, ‘अमेरिकाले बनाएर चीनमा पठा’को भन्ने लेखेको रैछ; मैले पनि पढेको थिएँ।’ टहल्न हिँडेकाले चाहिँ हातमा बस्न आएको लामखुट्टे धपाउँदै थपे, ‘यो चिसामा मात्रै फैलिने बनाएको भन्छ तर गर्मीमा पनि फैलिन थाल्यो। जे बनाए पनि बनाइसकेपछि मान्छेले चाहे जस्तो मात्रै हुँदो रैनछ।’ लज सञ्चालकको मत थियो, ‘खै होउ, अरू धनी देशले त हामी जस्तो सानो व्यापारीलाई पनि खर्चबर्च दिन्छ भन्छन्। हाम्रोले त के देला र? गाउँमा खेतीपाती हुनेलाई सजिलो भयो अब। आफ्नोत सबै सिद्ध्याइयो।’ औषधि पसलमा आइपुगेका एक ग्राहकले वरैबाट गफमा सामेल पसलेलाईसोधे, ‘क्लोरोक्विन भन्ने दवाई छ?’ उनले ‘छैन’ भन्न मुन्टो हल्लाए।
भारतबाट फर्केका रेस्टुरेन्ट–मजदुर होऊन् वानेपालकै यातायात–मजदुर वा साना व्यापारी,कोही पनि सूचनाभन्दा पर छैनन्। उनीहरूसँग स्मार्टफोन छ इन्टरनेट चलाउन जान्दछन्; सम्भवतःसबैको फेसबुक अकाउन्ट पनि छ। बन्द भएका बेला सडकपेटीमा गफ गरेझैं, कामको चटारो बीचमा पनि सम्भवतः मेसेन्जरमा गफिन्छन्; फेसबुकमा आएका खबर पढ्छन्; भिडियो हेर्छन्। यहाँ चर्चा गरिएका पात्र सबैजसो भारतीय टेलिभिजनका नियमित दर्शक हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। दुनियाँमा भइरहेका अनेक घटनामा चासो राख्छन्; त्यसैले खबर सुन्छन्, हेर्छन् र पढ्छन्।तर तापक्रम मापनलाई कोरोना परीक्षण बुझ्छन्। विषाणुको फैलावट र महामारीलाई भूराजनीतिक षड्यन्त्र सम्झन्छन्। औलोका लागि उपयुक्त ठानिएको क्लोरोक्विन नामक औषधिले कोरोना निको हुने ठान्छन्। क्वारेन्टाइनमा राख्न बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।अफवाहका भरमा अनावश्यक वस्तुको सेवनमा वृद्धि भएको छ, जसका कारण अन्य स्वास्थ्यसंकट निम्तिन सक्छन्। यस्तै अवस्था कायम रहे ज्वरो आएको बिरामीलाई हेर्ने र ऊसँग गर्ने व्यवहारमा न्यानोपन, सहानुभूति र हार्दिकता हराउन सक्छ। सही सूचना र वैज्ञानिक जानकारीको अभावमा प्रत्येक बिरामीले अछूतको व्यवहार भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। बाहिरबाट आएको हरेक छिमेकीमा सन्देह पैदा हुँदा गाउँ र नगरवासीको आपसी सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न सक्छ।
यस्तो प्रत्येक छिद्रलाई उपयोग गर्दै समुदायमा शासकको नियन्त्रण वृद्धि हुन सक्छ। शासक सधैं घरेलु मात्रै नहुन सक्छन्। घरेलु शासकका कमजोरी ‘एक्सपोज’ हुन थाले, बाहिरियाले विज्ञानसम्मत सूचना एवं ज्ञानमा आधारित व्यवस्थाको ठेक्का लिइदिने खतरा आइपर्न सक्छ। सतहमा देखिएका साना कमजोरीलाई उपयोग गर्दै निगरानी प्रविधि हातमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय शासकले हैकम विस्तार गर्न सक्छन्। त्यसैले सजगतापूर्वक नागरिकको ज्यानका साथै लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नु अहिलेको चुनौती हो।
लोकतन्त्र बचाउन ज्ञान र सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संस्थाहरूको निर्माण आवश्यक हुन्छ। लोकअनुकूल निर्माण गरिएका विधिअनुसार ती संस्था सञ्चालन भए मात्रसबैका लागि काम दिने हुन्छन्। समुदायले संस्था र संस्था सञ्चालनका विधिप्रति अपनत्व जनाउनुपर्छ। हाम्रा संस्था र संस्था सञ्चालनका तरिकाले हाम्रा कमजोरी उदांगो पारिदिएका छन्। आशा गरौं, नेपालमा ठूलो क्षति नगरी कोरोना–कहर साम्य हुनेछ। त्यसपछि आइपर्ने अनेक संकट सामना गर्न प्रचुर कल्पनाशीलता र गहिरो अध्ययनको खाँचो छँदै छ, धमाधम थाल्नुपर्ने कामको सूची पनि असाध्यै लामो छ। मेचीकिनारबाट पनि हाम्रो त्रासद विडम्बना प्रस्ट देखिन्छ— विद्यमान नेतृत्व चुनौती सामना गर्न तयार छैन।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ ०८:३१